ကူမင်းမှာ အဒေါ်ရှိတယ်။ အဒေါ်အိမ် သွားတည်းလိုက်ပါအုန်း....း)
အဲဒီမှာ ကြိုးတွေနဲ့ ရှုပ်နေတဲ့ ဓာတ်တိုင်တွေကော ရှိလားဟင်...
ကောင်းတယ်ဗျာ. ကိုယ်တိုင်သွားလည်နေရသလိုပဲ. ဆက်ရေးပါဦးဗျို့ မှော်နေမယ်...
ဆရာလှရဲ့ စိနတိုင်း ခရီးသွားမှတ်တမ်း က အခုမှလာတာကိုး။
ဗဟုသုတရတယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးပဲ ကမောင်လှရေ။ ကူမင်းကို လေယာဉ်နဲ့သွားဖို့က နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လက်မှတ်နဲ့တင် ရလား။ အစစ်အဆေးတွေ ဘယ်လိုရှိလဲ။ အသိမိတ်ဆွေမရှိပဲ အလည်သွားလို့ရနိုင်လား။ သိရင် နည်းနည်းလောက်ပြောပြပါဦး။